रुकुम पश्चिम हत्याकाण्ड : भेरीमा दलितको लाससँगै देशको कानुन र मानवीय संवेदना पनि बग्यो - Kantipath.com
नेपालको कानुनले प्रत्येक व्यक्तिको मानवीय मर्यादा मात्र होइन, विवाह गर्ने र बरवधु छान्ने अधिकार पनि सुरक्षित गरेको छ, तर पश्चिम रुकुममा कथित माथिल्लो जातकी प्रेमिकालाई बिहे गर्न जाजरकोटबाट आएका युवाको समूहलाई ढुंगामुढा प्रयाेग गरेर हत्या गरियाे
पक्राउ परेका सबैलाई सोमबार राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम पु¥याइएको डिएसपी ठगबहादुर केसीले बताए । ‘प्रहरीले अनुसन्धान थालिसकेकोे छ, यथार्थ बाहिर आउँछ, दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनेमा शंका छैन,’ उनले भने ।
अजित धादिङ जानुपर्ने कुनै कारण थिएन । उनलाई अरू कसैले त्यहाँ पु¥यायो र झुन्ड्यायो भन्ने आफन्तको दाबी छ । मिजार परिवारले किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले युवतीका माइती पक्षका चारजनालाई पक्राउ गरेको थियो । तर, जिल्ला अदालत धादिङले सुरुमा तारेखमा छाड्यो । पछि अभियुक्तहरूलाई सफाइ दियो ।
उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे पनि घटनामा प्रहरीकै मिलेमतोमा प्रमाण नष्ट गरिएकाले न्याय पाउन नसकेको परिवारको गुनासो छ । शवको चिरफार नै नगरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेख्ने डाक्टरले गल्ती स्विकारे पनि अदालतले पीडितलाई न्याय दिन हिच्किचाएको अधिवक्ता मोहन शाशंकर बताउँछन् । ‘सरकारवादी मुद्दामा प्रहरी नै संलग्न भएर प्रमाण नष्ट गरिएको देखिन्छ, उत्खनन गरिएको शवको अनुहारको छाला जलेको थियो, एसिड प्रहार भएको हुन सक्ने हामीले आशंका ग¥यौँ, तर अदालतले परीक्षण गर्न चासो दिएन,’ अधिवक्ता शाशंकर भन्छन्, ‘अझै पनि अदालतले चाह्यो भने घटनामा प्रमाणहरू जुटाउन सकिने ठाउँ छन् ।’
रजहारी घटनालाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । पहिलो, घटनामा सिंगो गाउँ नै संलग्न छ । यो कुनै दुई व्यक्तिबीचको सामान्य मनमुटावको परिणाम होइन । यो सामूहिक नरसंहार हो । दोस्रो, घटना भएको ठाउँ तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको ठूलो प्रभाव भएको र छुवाछूतमुक्त जिल्ला पनि हो । यसले स्वभावैले तत्कालीन माओवादीको दलितप्रतिको वैचारिक दृष्टिकोण निर्माणको आधार के थियो भन्ने प्रश्न उठाउँछ । र, हामीले पछिल्लो दशकका राजनीतिक परिवर्तनहरूमार्फत बदलिँदो नेपाली समाजको परिकल्पना गर्दै गर्दा यो घटनाले हाम्रो समाज आधारभूत रूपमा बदलिएकै हो त ? सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
यसअघि ०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाईंलाई गैरदलितहरूको समूहले खुकुरीले छातीमा हानेर हत्या ग¥यो । त्यस घटनामा पनि सिंगो गाउँ नै दलित परिवारमाथि खनिएको थियो । ०६९ असारमा धादिङ पीडा– ५ मूलखर्कमा दलित युवकले सुवेदी थरकी युवतीसँग प्रेमविवाह गरेपछि गैरदलितहरूले सिंगो दलितबस्तीमाथि आक्रमण गरे । आक्रमणबाट दलितबस्ती नै विस्थापित भयो । ०७३ मा काभ्रेका अजित मिजार पनि अन्तरजातीय विवाहकै कारण मारिए । उनको शव अझै शिक्षण अस्पतालमा छ । परिवारले हालसम्म न्याय पाएका छैनन् । केही अध्ययनहरूले ०६८ सालमा जातीय भेदभावविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अन्तरजातीय विवाहकै कारण आत्महत्या र हत्याका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको देखाएका छन् । यसबीचमा २५ जना युवाले दलित समुदायकै भएका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
यो घटनाले सिंगो गैरदलित समुदायमाथि प्रश्न उठाएको छ । यो प्रश्न गैरदलित समुदायको चेतनामाथिको प्रश्न हो । यो प्रश्न गैरदलित समुदायमा मानवीय मूल्यमाथिको प्रश्न हो । यो प्रश्न गैरदलित समुदायमा सामाजिकीकरणको प्रश्न हो । र, यो प्रश्न हरेक गैरदलितले आफ्ना सन्तान र आफूलाई अपराधी बनाउने कि मानवीयकरण गर्ने भन्ने हो । हामी जति नै मौन बसे पनि चौरजहारी घटनाले वर्षौंसम्म पछ्याइरहनेछ ।
र, हामीले एकएक जवाफ आफ्ना सन्तानलाई दिँदै जानुपर्नेछ । एक दिन यस्तो अवस्था आउनेछ आफ्ना सन्तानको जवाफ दिन उनीहरूका अघि आफैँलाई अपराधी स्विकार्नुपर्नेछ । नयाँ पत्रिका
Previous Previous post: विप्लव नेतृत्वको नेकपाकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य बन्दनाको निधन
Next Next post: चन्द्र शमशेरको पत्र जसले लिम्पियाधुरासम्मै नेपाल प्रमाणित गर्छ
यी हुन् प्रचण्डलाई पेस्तोल उपहार दिने मन्त्री !
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्नुमा यी हुन् ५ कारण
भाडाका मान्छेहरु प्रयोग गरेर विस्फोट
भारतीय सेना प्रमुखले दिएको अभिव्यक्तिबारे के भन्छ नेपाली सेना ?
भत्कियो सहमति : किन अझै २ बैठकको अध्यक्षता गर्न चाहन्छन् ओली ?
देउवाको यो पो रहेछ खास रणनीति